नेपाल आउने ओमान टिममा नेपाली सुरजले पनि बनाए स्थान, अरु को को परे ? हेर्नुस - News20 Media
नेपाल आउने ओमान टिममा नेपाली सुरजले पनि बनाए स्थान, अरु को को परे ? हेर्नुस
January 22, 2020 January 22, 2020 N20LeaveaComment on नेपाल आउने ओमान टिममा नेपाली सुरजले पनि बनाए स्थान, अरु को को परे ? हेर्नुस
काठमाडौंः आइसिसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकाविरुद्ध हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि ओमानले राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ। माघ तेस्रो सातादेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा हुने सिरिजका लागि ओमानले जिसम मसुदको कप्तानीमा १४ सदस्यीय राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको हो।
माघ २२ देखि हुने सिरिजमा तीन टिमले एकअर्काविरुद्ध २-२ पटक खेल्नेछन्। जसमा ६ एकदिवसीय खेल हुनेछन् भने प्रत्येक टिमले ४ खेल खेल्नेछन्। सिरिजका लागि ओमानले युएई र नामिबियाविरुद्धको त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेका खेलाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
ओमानले अहिलेसम्म ८ खेलबाट ८ अंक जोडेको छ भने अंक तालिकको चौथो स्थानमा छ। यसअघि अमेरिकाले पनि सिरिजका लागि राष्ट्रिय टिम घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकाले सिरिजका लागि मुम्बईमा अभ्यास गर्ने जनाएको छ।
नेपालले भने पोखरामा तयारी गरिरहेको छ। तयारीका क्रममा नेपालले मलेसियाको टिमसँग दुई अभ्यास खेल खेलेको छ। दुवै खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। लिग-२ टिममा नेपालले पहिलो सिरिज खेल्न लागेको हो।